गगन थापासँग विशेष वार्ता ‘कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले अब विश्राम लिनुपर्छ’ — newsclubnepal.com
मेची-महाकाली वामपन्थी हावा चल्दै गर्दा काठमाडौं- ४ मा सुरक्षित उभिए, गगन थापा । कांग्रेसका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरू वाम लहरका अघिल्तिर टिक्न सकेनन् । बौद्धिक छविका एमाले प्रतिस्पर्धी डा. राजन भट्टराईलाई तीन हजार चार सय मतान्तरले पछि पार्दै जितेका थापालाई चुनावमा धर्मराएको कांग्रेसका शुभेच्छुक सम्हाल्नुपर्ने चुनौती यसकारण छ, उनीलगायत युवा पुस्तातिर उनीहरू अपेक्षाको नजरले हेरिरहेका छन् । शनिबार बिहान विजय जुलुसमा सामेल भएर पोखरा हानिएका उनी अपराह्न काठमाडौं फर्कंदा विजयको कुनै खास उल्लासभाव देखिन्नथ्यो, निधारको सानो टीकाबाहेक । उनले हामीसँग कुराकानीका क्रममा अब कांग्रेसको पहिलो पुस्ताले चुनाव पराजयको जिम्मेवारी लिँदै वि श्राम लिनुपर्ने अभिव्यक्ति मात्रै दिएनन्, अब विशेष महाधिवेशन डाकेर नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्नेसमेत प्रस्ताव गरे । उनले आसन्न वामपन्थी सरकारले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम दिन सक्ने सम्भावनाबीच कांग्रेसले मध्यमार्गी नीतिको बाटो अवलम्बन गरिरहनुपर्ने तर्कसमेत दिए । थापासँग कुराकानी :
यो वाम लहर हो वा दुई पार्टीबीचको गठजोडको परिणाम हो, समानुपातिक मतगणना भइनसक्दासम्म अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ । कांग्रेसको अनुमान थियो- यो केवल एमाले र माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन हो, जसमा समर्थकहरूको भोट जस्ताको तस्तै सरुवा हुँदैन । तर भोट मज्जाले सरेको देखियो । कांग्रेसलाई मतदान गर्दै आएका मतदाताचाहिँ घटेका हुन् कि होइनन्, घटेका हुन् भने कति घटेका हुन भन्नेचाहिँ पूरा परिणाम आएपछि भन्न सकिन्छ । यो भन्दै गर्दा के भन्नचाहिँ हतारो हुन्न भने योपल्ट कांग्रेसका समर्थकबाहेक अन्य मतदातालाई पार्टीले आकर्षित गर्नै सकेन ।
वामपन्थी कमजोर हुँदा कांग्रेसका लागि स्पेस बन्छ भन्ने धारणा राख्नु नै गलत हो ।
एउटा संगठित पार्टीका सशक्त अभियन्तासँग हामी लड्दै थियौं, जबकि हामीसँग केही पनि कुरा योजनाबद्ध थिएन । एक्लै लडेर आयौं । सिंगो कांग्रेस पार्टी यसपल्ट चुनावमा होमिएको थिएन । कसरी योजनाबद्ध प्रोपागान्डाका शृंखला चले ! वास्तवमा हामी त बल्लबल्ल बाँचेर यसपालि आएका हौं । एउटा त्यस्तो पार्टीको विचार, संगठन, आक्रामक अभियान अनि व्यवस्थित प्रोपागान्डा पार गरेर आयौं । तर चुनाव अभियानमा मात्रै चुकेकाले हारेको भन्नु अपूरो हुन्छ । दुई वर्षयताका सबै शृंखलालाई एक ठाउँ राखेर हेर्नुपर्छ ।
दुईवटा पाटा छन् । संविधान बन्ने बेलासम्म जनताले बुझ्ने गरी हाम्रो स्पष्ट एजेन्डा थियो- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने । अरू कुराले हाम्रासामु धेरै अर्थ राख्दैनथ्यो । त्यसअघि पनि हामो एजेन्डा स्पष्टै थियो, माओवादीलाई युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा लेराउने । संविधान निर्माणपछि भने हामी बरालियौं । जनतासँग जोडिने हाम्रो मुद्दा नै भएन । हामी अब को हौं त, हाम्रो उद्देश्य के हो त ? त्यसै बेला हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी भने राष्ट्रवादको एजेन्डा मैदानमा लिएर आयो । त्यही बेला हाम्रा निर्णयहरूलाई भने जनताले अर्कै ढंगले बुझे । राजनीतिक पार्टीबाट जनताले अब के हुन्छ त, कस्तो एजेन्डा बोक्छ त भनी अपेक्षा गर्छन् । हाम्रो नेतृत्वपंक्तिले अबको नेपाल हाँक्छ भन्ने नारा लोकप्रिय हुनु त कता, उल्टै जनता तर्सिए । उनीहरू यो लिडरसिपलाई मान्न तयारै भएनन् । यसको मतलब के होइन भने, फगत एक व्यक्तिले यी दोषहरूको जिम्मा लिनुपर्छ । यो आरोप लगाउने तरिका मात्रै हो, जसले कुनै टुंगोमा पुर्‍याउँदैन ।
तीनवटा कुरा तत्काल गर्नुपर्छ- एक, जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका छन्, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धन आउँदैछ, लोकतन्त्रका केही मूल्यमान्यतामा सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्न खोजी हामी रोक्न तयार हुनुपर्छ । किनभने हामीले भनेको कुरै त्यही हो । दोस्रो, कांग्रेसको सिंगो पार्टीपंक्तिले अब ग्र्यान्ड रिफर्म (आमूल परिमार्जन) का लागि आफूलाई तयार पार्नुपर्‍यो । यो सुधार सभापति देउवाले मात्रै गरेर हुँदैन, माथिदेखि तलसम्म प्रत्येक कार्यकर्ताले पार्टीमा ठूलो परिवर्तन चाहिएको छ, त्यो आफैंबाट थाल्नुपर्छ भन्ने मान्नुपर्छ । तेस्रो, सुविचारित बहसको कार्यसूची बनाऔं । आजका मितिमा म के भन्न सक्छु भने, पार्टीभित्र तुरुन्त उत्साह सिर्जना गर्न पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अब वि श्राम लिनुपर्‍यो । यी नेतामध्ये कोही यो चुनाव जितेर आउनुहोला, कोही पराजित भएर । तर आदरपूर्वक वि श्राम लिनुपर्‍यो । पार्टीले तुरुन्त विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्‍यो । समग्र समीक्षा गरेर अबको योजना बनाउनुपर्‍यो । पार्टी संरचनामा ठूलो फेरबदल गर्नुपर्‍यो । अनि संविधान निर्माणपछिको यो परिदृश्यमा कांग्रेसले आफ्नो औचित्य जोडका साथ स्थापित गर्न जनतासँग जोडिने खालका मुद्दाहरूको खोजी गर्नुपर्‍यो, तिनलाई स्थापित गर्न लाग्नुपर्‍यो । यतिचाहिँ मानेर जानुपर्‍यो ।
आज हामीले दिनभर सोसल मिडियामा कतिपयको टिप्पणी देख्यौं- किन महाधिवेशन कुरिरहने, संसदीय दलको नेता नै फेरेर पार्टीमा नयाँ उत्साह भर्नुपर्छ । तपाईंको टिप्पणी ?
कांग्रेस पुनर्जागरणको धारणा भनेको हाम्रो आफ्नो एजेन्डा, पहिचान र कार्यशैलीमा प्रखरता ल्याएर जनतामा जाने नै हो ।
कांग्रेस जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चलाइरहँदा राजनीति हाम्रो हातमा रहन्छ भन्ने सोच व्याप्त राखेर हुन्न । पछिल्ला राष्ट्रिय मुद्दामा आफूलाई सही कित्तामा राख्न सकेनौं । पार्टीको भ्रातृ संस्था अधिवेशनजस्तो सामान्य कुरामा वास्ता गर्न सकेनौं । त्यसैले टालटुले सुधारले अब हुँदैन । विशेष महाधिवेशनमा केवल पदाधिकारी छान्ने कुरा होइन, संरचनागत कुरा गर्नुपर्छ । दुईवटा कम्युनिस्ट मिलेर एउटै पार्टी मिलाउँदा जुन संगठन शैली अपनाउँछन्, त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यस्तै बन्ने वा बढी लोकतन्त्रीकरण गर्दै जाने ? म त कांग्रेस अब खुला सदस्यतामा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । तर छलफल त हुनुपर्‍यो नि । खुला सदस्यताले तत्काललाई क्षति त होला, तर दीर्घकालका लागि यही बाटो उचित हो ।
८. संसद्‍मा अब तपाईंहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ? कि फेरि माओवादीसँग सत्ता समीकरण गर्ने हो ?
वामपन्थीहरू गठबन्धन बनाएर किन सफल भए ? किन लोकतान्त्रिक गठबन्धनचाहिँ सफल भएन ?
कांग्रेसलाई नयाँ बनाउनेभन्दा पनि २००७ सालको कांग्रेसजस्तो बनाउनेतिर सोच्नुपर्छ । त्यस्तो कांग्रेस, जसमा जनताको पूरापूरा भरोसा छ ।
कांग्रेसकै केही साथीभाइले चुनाव सार्न वा संघ र प्रदेश चुनावलाई अलगअलग मितिमा गर्ने प्रस्ताव नल्याएका होइनन् । तर प्रधानमन्त्रीले बरु प्रलय हुन्छ भने होस्, तर म चुनाव सार्दिनँ भनेर कडा अडान लिनुभयो ।
एउटा संगठित पार्टीका सशक्त अभियन्तासँग हामी लड्दै थियौं, जब कि हामीसँग केही पनि कुरा योजनाबद्ध थिएन । एक्लै लडेर आयौं । सिंगो कांग्रेस पार्टी यसपटक चुनावमा होमिएको थिएन ।
कसरी योजनाबद्ध प्रोपागान्डाका शृंखला चले ! वास्तवमा हामी त बल्लबल्ल बाँचेर यसपालि आएका हौं ।
हाम्रा लागि यो नेतृत्वको औचित्य अब सकियो । त्यसैले पार्टी नेतृत्वदेखि संसदीय दल सबैतिर नयाँ कुरा चाहियो ।
बढी सरकारमा बस्ने त यही वाम गठबन्धनका पार्टी हुन् नि । तर चुनावमा खै बताउन सकेको ? हामीसँग क्षमता र शैली नै भएन । हो, मैले यहींनेर लिडरसिपको कारण देखाएको । जनता हाम्रो नेतृत्वसँग यति सञ्चारविच्छेदको अवस्थामा थिए कि नेतृत्वले बताएको कुरालाई उनीहरूले लिइरहेकै थिएनन् ।
भयो, अब त भयो भयो । कांग्रेसका साथीहरूलाई मेरो अपिल छ : हामीसँग यो बेला दुईवटा विकल्प छन् । एक, हामी असाध्यै कमजोर भएर सकियौं भन्ने लघुताभासमा बस्नुपर्‍यो । दुई, यो हार कांग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने ठूलो अवसर हो भन्ने ठानेर अघि बढ्नुपर्‍यो । हामीले पहिलो संविधानसभामा पनि करिब यस्तै अवस्था भोगेका थियौं । माओवादीले जहाँतहीं जितेका बेला कांग्रेस बिस्तारै पुनर्जागृत भएको हो । तर त्यसका लागि नयाँ काम गर्नुपर्‍यो । हिजोकै शैलीमा हिजोकै काम गरेर फरक नतिजा आउँदैन । पार्टीका साथीहरू, तपाईंहामी दोस्रो विकल्पमा जाऔं । यो, त्यो नभनी अहिले बनेका सारा गुटहरू भत्काइदिऔं । समान ढंगले पार्टीप्रति चिन्तन भएका साथीहरू एक ठाउँमा आऔं ।
यो चुनावले कांग्रेस मात्रै लोकतन्त्रको पहरेदार हो भन्ने मान्यता खण्डित गर्‍यो भन्ने लाग्दैन ? एमाले पनि प्रतिबद्ध लोकतन्त्रवादी भएर आइसक्यो । अनि विवेकशील साझा पार्टीलगायत पनि आइसके ।
नेपाल गलत बाटोमा नजाओस् भन्ने सन्दर्भमा सर्वाधिक ठूलो भूमिका अब नेतृत्व गर्ने पार्टीको हुन्छ । उसले यो विषयलाई कसरी ह्यान्डल गर्नेछ ? घरभित्रको जनमतलाई आकृष्ट गर्ने नाममा झन् ठूलो दुर्घटनामा लिएर पो जान्छ कि ! विवेक पुर्‍याएर सबैलाई समेटेर पो जान्छ कि ! कांग्रेस यसमा प्रतिक्रियात्मक भएर चल्नु हुँदैन । संसदभित्रको प्रतिपक्षी हुनाले हामी प्रजातान्त्रिक मूल्यमा जसरी कतै सम्झौता गर्दैनौं, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा पनि न समर्पण, न गलत सम्झौता, न कसैप्रति अनावश्यक रुझान । हामी कसैको खेल्ने मैदान पनि नबनौं, अतिरिक्त चासोको विषय पनि नबनौं । हामी सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो बाटो आफैं तय गरौं ।
प्रचण्डलाई चाहिँ के सन्देश छ ? उहाँ त तपाईंहरूसँगै अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ ।
(हाँसो) यसबारे चाहिँ मैले सोचेको रहेनछु । उहाँलाई मेरो यत्ति भन्नु छ- अहिलेसम्म हामीसँगै हुनुहुन्छ । अब गठबन्धनको सरकार बन्ला । अहंकार र अतिवादको भारी बोकेर ओलीको यात्रा होला कि भन्ने मैले आशंका गरेको छु । तपाईंको आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि त्यो सहयात्राको प्रारम्भ त्यसरी नहोस् । राष्ट्रिय राजनीतिमा समन्वयको भूमिका तपाईंबाट अपेक्षित छ । राष्ट्रिय राजनीति चर्को ध्रुवीकरणमा नजाओस् ।
तपाईंलाई साँच्चिकै विश्वास छ, एमाले-माओवादी गठबन्धन पार्टी एकतासम्मै पुग्नेछ ?
(एकछिन सोचेर) शंका छ । यो गठबन्धनलाई जतिसुकै सैद्धान्तीकृत गरे पनि यात्रा सँगै अघि जाला भन्नेमा शंका छ । हामी सरकारमा नजिकै बसेर हेरेको आधारमा, हामीसँग भएका छलफलहरू पनि थाहा छ । अंकगणितका बारेमा पनि राम्रै ज्ञान छ । बाहिर जे भनिए पनि भित्र हिसाब नमिलेको थाहा पाइसकेपछि… (फेरि हाँसो) । पत्याइहाल्ने बेला भएको छैन । तर प्रि-इलेक्सन अलाइन्स आफैंमा खराब कुरा होइन । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले यस्ता गठबन्धनको माग पनि गर्छ । यत्ति हो, उहाँहरूको गठबन्धन बन्यो, हाम्रो सफल भएन । तैपनि गठबन्धन एउटै पार्टी बनेर जाओस्, शुभेच्छा छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट